IINKONZO KUNYE NEENGOZI ZECORIAN SHOWER WALLS - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela Iinkonzo kunye neengozi zeCorian Shower Walls
Apha sabelana ngesikhokelo sethu ngokulungileyo kunye nokubi kweendonga zeshawari zeCorian kubandakanya indleko zazo nokuba zilukhetho olufanelekileyo kuyilo lwakho lokuhlambela. Xa ufaka ishawa entsha okanye uhlaziya endala, unokhetho onokulwenza- iipaneli okanye iithayile?
Iithayile zeCeramic ngokungathandabuzekiyo zinomtsalane, kodwa kunzima ukufaka nokugcina. Iiphaneli zeshawari zeplastiki kulula ukuzifaka kwaye zigcine zicocekile, kodwa zikhangeleka zingabizi.
Ngeendonga zeshawari zeCorian, ufumana okona kulungileyo kuwo omabini amazwe; uyilo olumangalisayo olungena ngxaki.
Zithini iiCorian Shower Walls
Iindonga zeCorian Shower Pros
IiCorian Shower Walls Cons
ICorian Shower Iindonga zemibuzo edumileyo kunye neempendulo
Ngaba iCorian ilungile kwiNdonga zokuhlamba?
Ixabisa malini i-Corian Shower?
Ngaba iCorian lukhetho olufanelekileyo kumagumbi okuhlambela?
Ngo-1964 inkampani yemichiza ebizwa ngokuba yiDuPont yaqala ukuvelisa imveliso entsha kraca phantsi kwegama lophawu lweCorian. Kwafunyanwa kunyaka ongaphambili xa usosayensi waseDuPont ogama linguDonald Slocum ephumelele.
Wayeqonda ukuba kunokwenzeka ukubopha amasuntswana ezinto zendalo kunye nentlaka ye-acrylic. Ngcono nangakumbi, umphumo wezinto eziqinileyo zomhlaba ezazingangxoli, ukumelana namabala kunye nomonakalo, kwaye kwakulula ukuwulungisa.
Izicelo zokuqala yayiziikhawuntara zasekhitshini kunye nezitshizi, kodwa ngokukhawuleza yashenxela kwigumbi lokuhlambela, apho inokusetyenziselwa ukutyibilika, imiphezulu yeetafile, iisinki, okanye indawo ezivalelekileyo zeshawari.
Kwiminyaka engama-30, iDuPont ibibambe amalungelo awodwa okuvelisa lo mbandela mtsha umangalisayo. NjengoXerox okanye uKleenex, igama lebrendi (iCorian) lafana nemveliso uqobo.
Ukuphela kwelungelo elilodwa lomenzi, ezinye iinkampani zaqala ukuvelisa kunye nokuthengisa iipaneli ezenziwe kusetyenziswa inkqubo kaSlocum. Abavelisi beepaneli bazibhengeza 'njengomphezulu onzima' okanye 'indawo eqinileyo'.
Nangona indlela yokuvelisa iCorian ingasakhuselwanga lilungelo elilodwa lomenzi wechiza, iDuPont iye yahlala ifanelekile ngokuphuhlisa iimveliso ezisekwe eCorian.
Ezinye zenzelwe ukulinganisa izinto zendalo ezinje ngegranite kunye Iishawa zemabhile , Ngelixa abanye bekhona ngoku.
Namhlanje, babambe amalungelo awodwa omenzi wechiza kwinto yokuqala ebonakalayo eguqukayo, enokubuyiselwa umva ukubonakala kwekamva.
Ngoku makhe sijonge ubuhle nobubi beendonga zeshawari zaseCorian.
Into evikela amanzi - Isibonelelo esinye esikhulu seendonga zeshawari zecorian ngaphezulu kweethayile zeceramic kukuba azinangxangxasi kwaye, xa zifakwe ngokufanelekileyo, zingangeni manzi. Endaweni yokungena kwi-groutline, amanzi aqengqeleka ebusweni beendonga zeshawari zeCorian.
yimalini ukuqasha ilokhwe yomtshato
Akukho migca ye grout - Oko kusizisa kwinzuzo yethu yesibini; akukho migca ye grout. I-Grout yi-bane yobukho bomninikhaya ngamnye. Ijongeka intle xa ifakiwe, kodwa ngenxa yokuphakama okuphezulu ngokukhawuleza iba likhaya lokungunda nokungunda.
Njengokuba nabani na ochithe i-grout yokuhlikihla emva kwemini angangqina, kudla ixesha kwaye kunzima ukugcina ucocekile. Abanini bamakhaya abaninzi baphethukela kwiingcali zokucoca ukubuyisela ukubukeka 'okutsha', kodwa le yinkcitho eyongezelelweyo.
Ayifuni ukuthengiswa kwakhona - Iiphaneli zeshawa zeCorian azinayo i-grout, kodwa zinamalungu. La malungu kufuneka alungelelaniswe ngokufanelekileyo aze atywinwe ukuthintela ukungena kwamanzi kwi-drywall ngaphantsi. Ngokungafaniyo neethayile ezigayiweyo, uCorian akaze afune ukuthengiswa kwakhona.
Kulula ukufaka - Xa kuthelekiswa nokufaka iithayile zeceramic, indawo elukhuni ishawa yangasese Iindonga zinokufakwa ngokulula ngakumbi kwaye ngokukhawuleza. Endaweni yokusika iithayile ukuze ilingane nepateni, uCorian uza kufika kwikhaya lakho ngaphambi kokunqunqa kwinkcazo yakho. Ukuba ufuna ukwenza uhlengahlengiso, lunokusikwa ngokulula ngesarha yesetyhula okanye ijigsaw.
Isiqinisekiso seminyaka eli-10 - Iiphaneli zeshower zomphezulu oqinileyo ezinophawu lomhlaba zinesiqinisekiso seminyaka eli-10. Oku akugubungeli iimpazamo kufakelo. Uninzi lwezinto eziqhelekileyo zomhlaba oqinileyo zinesiqinisekiso esifanayo, kodwa jonga iinkcukacha zomenzi ukuze uqiniseke.
Uhlobo lwemibala - Ngoluhlu lweepateni kunye nemibala efumanekayo kwintengiso, yicinch ukufumana indawo eqinileyo yeshawa yakho eya kujongeka intle kwaye ihlale iminyaka.
Ingabuyiselwa - Ukuba umphezulu ugcina umonakalo, unokuphinda uhlanjululwe ukuze ubuyisele inkangeleko yawo, ngokungafaniyo neetiles zeceramic ezifuna ukususwa zitshintshwe.
Iindonga zeshawari zeplastikhi zinokulinganisa iimveliso zomphezulu onzima xa kufikwa ekugcineni i-drywall yakho yomile kwaye ibiza kakhulu. Nangona kunjalo, amaxabiso asezantsi abonisa ukubonakala kwawo, esenza indawo yakho yokuhlambela yeshawari ijongeke ngexabiso eliphantsi.
Kubiza kakhulu kuneplastiki - Iindonga zeshawari zomphezulu oqinileyo, nokuba zithengiswa phantsi kwegama lophawu lweCorian okanye akunjalo, zineengxaki ezimbalwa. Ngelixa zibiza kancinci kune-quartz yobunjineli, umzekelo, zibiza kakhulu kuneendonga zeplastiki zeshawari.
Ayenziwanga ngokwezifiso njengetayile- Xa iCorian yaveliswa okokuqala, yayifumaneka ngombala omnye -mhlophe. Iindonga zeshawari yomphezulu onzima ngoku ziyafumaneka kuluhlu loyilo olumangalisayo kunye nemibala. Kwaye okwangoku, akukho nto inokulingana nokwenziwa kwetayile ngokwezifiso.
Ngethayile, awunakukhetha kuphela umbala ngqo kunye noyilo olunqwenelekayo, ungafaka imida kunye nokufakwa ngaphakathi. Iindonga zeshawari zomphezulu oqinileyo zihlala zinombala omnye okanye uyilo kuyo yonke indawo, zibanike ukujonga okungagungqiyo kunye nokuhlengahlengiswa okuthandwa ngabantu abaninzi.
ICorian ayilunganga kuphela kwiindonga zeshawari, ilungile, ngakumbi ukuba unenjongo yokuyifaka ngokwakho.
Ukufakwa kunamanyathelo amathathu kuphela. Okokuqala, xhoma i-drywall enganyangekiyo yokufuma. Emva koko, sebenzisa isincamathelisi esifanelekileyo. Khusela iiphaneli, tywina amalungu, kwaye ugqibile.
ICorian kulula ukuyifaka kwaye iya kujongeka intle kwiminyaka ezayo. Ayisiyo-porosity eyenza ukuba ibe lukhetho olucacileyo lweemeko ezimanzi, kwaye akukho ndawo yekhaya lakho evezwe kukufuma okungaphezulu kuneendonga zakho zeshawari.
I-Corian inokuthi ibe ne-thermoformed. Ngokufaka ubushushu obuphezulu kwizinto eziphathekayo, kunokwenzeka ukuba ukugoba kunye nokujika kujikeleze ngqo Ubungakanani beshawa sakho , akunamsebenzi nokubalulwa.
Ukuba ufuna ulondolozo olusezantsi kunye nezinto ezihlala ixesha elide zezakho ishawa yokuhamba-hamba Iindonga, musa ukujonga ngaphezulu kwezinto zomgangatho oqinileyo ezinje ngeCorian.
Lindela ukuhlawula phakathi kweedola ezingama-42 kunye nee-65 zama-65 ngeenyawo zesikwere kwizinto eziphathekayo. Indawo evaliweyo yokuhlamba isilinganiselo malunga neenyawo ezingama-70, ngobunzulu beenyawo ezintathu, ububanzi beenyawo ezine, kunye nokuphakama kweenyawo ezisixhenxe.
Umsebenzi wokufaka iindonga zeshawari zaseCorian kufuneka zibize malunga ne- $ 150. Xa udibanisa konke oku kunye, ixabiso eliqhelekileyo lokufumana ishawa kunye neCorian kufuneka liwele phakathi kwe- $ 3,100 kunye ne-4,700 yeedola.
iintyatyambo ezintsha zomtshato
ICorian yinto entle neyomeleleyo yokwakha engenamanzi, iyenza ilungele izindlu zangasese. Abanye abantu babuza ukucebiseka kokusebenzisa i-Corian kwipani yeshawari, okanye umgangatho weshawa, ngenxa yomphezulu wayo omdaka kunye nomtyibilizi.
Nangona kunjalo, ukutyibilika okungatyibilikiyo kunokudityaniswa kwiCorian, eyenza ukuba ibe yindawo efanelekileyo yokuhlamba ngaphezu kweendonga, iibhentshi zokuhlamba kunye neetafile.
Ngaba siphosakele naziphi na izinto eziluncedo kunye neengozi zeendonga zeshawari zaseCorian? Sazise kwicandelo lamagqabaza usixelele ukuba ucinga ntoni. Kuyilo olunxulumene ngakumbi ndwendwela iphepha lethu Iingcamango zokuhlaziya .
unganxiba izihlangu ezimhlophe emtshatweni
Izipho zeminyaka emi-2 zomyeni
imilinganiselo yewasha kunye neyomileyo
I-cameron diaz kunye nemifanekiso yomtshato ka-benji madden
Iimpahla zokutshintsha kwiindwendwe zomtshato
siqeshise i-runway iilokhwe zegolide